यमाहाको नयाँ वर्ष अफर, प्रत्येक खरीदमा ५ हजार छुट Bizshala -
यमाहाको नयाँ वर्ष अफर, प्रत्येक खरीदमा ५ हजार छुट
काठमाण्डौ । यमाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले नयाँ वर्ष २०१७ को अवसरमा नयाँ अफर ल्याएको छ ।
यमाहाको दसैं अफरमा ग्राहकहरुबाट पाएको अपार साथबाट उत्साहित एमएडब्लुले नयाँ वर्षको उत्सवलाई थप उल्लासमय बनाउन ‘फाइभबुलस २०१७’ अफर ल्याएको हो । यो अफर अन्तर्गत यामाहा ब्रान्डका जुनसुकै मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकले पाँच हजार रुपैयाँ नगद छुट पाउनेछन् ।
‘यमाहाले सधैं आफ्ना ग्राहकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर योजना ल्याउने गर्छ । हामी सुरक्षा, गुणस्तर र विश्वस्तरीय अनुभवप्रति निकै सचेत छौं । दसैं अफरमा हाम्रा ग्राहकको प्रतिक्रियाबाट हामी निकै उत्साहित भएर नयाँ वर्षको अवसरमा यो अफर ल्याएका छौं,’ एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज, यामाहा डिभिजनका सेल्स एन्ड बिजनेस डेभलपमेन्ट–एजीएम दिपक रौनियारले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ यो अफरले नयाँ वर्षको उत्सवलाई थप उल्लासमय बनाउनेछ । हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं कि यामाहाका मोटरसाइकल र स्कुटर किन्ने यो उत्तम समय हो । किनभने हामी जे गर्छौं हाम्रा ग्राहकको पक्षमा गर्छौं ।’
नयाँ वर्ष योजना यामाहाका सबै मोटरसाइकल र स्कुटरका मोडेलमा लागू हुनेछ । एमएडब्लुले यसै वर्ष स्पोर्टी स्कुटर रे जेडआरलाई नेपालमा ल्याएको थियो । यसबाहेक बजारमा यामाहा एफजेड–एस एफआई, एफजेड एफआई, आर १५, स्यालुटो, एसजीआरआर, फेसिनो, रेजी र प्राविधिक रुपमा उच्च स्तरीय आर३ उपलब्ध छन् । यामाहाका मोटरसाइकल र स्कुटरहरु प्याटेन्टेड ‘ब्लु कोर’ इञ्जिनजडित छन् ।
ग्लोबल ट्रेक फेस्टको बहुमत उपाधि बालाजु अटोवर्कको कब्जामा
काठमाण्डौ । हालै आयोजित दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको अन�...
सुजकीद्वारा अरुण ईन्टरकण्टिनेन्टल उत्कृष्ट वितरक घोषित, ८
काठमाण्डौ । सीजी होल्डिङ्स अन्तर्गको अटोमोटिभ डिभिजन अरुण...
दीपावलीअघि ५ कार कम्पनी धमाकेदार मोडल उतार्ने तयारीमा
काठमाण्डौ । दशैं सकेर तिहारअघि नयाँ कार खरीद गर्ने योजना...
दशैंमा कारको नाममा यमराजको बाहन त रोज्नुभएको छैन ?
काठमाण्डौ । यूरोपियन न्यू कार असेसमेन्ट प्रोग्राम(यूरो ल्ऋब्ए)को...
दशैंमा आफ्नो सवारीसँगै नेलपोलिस पनि बोक्नुहोला, टर्नेछ ठूलो
काठमाण्डौ । यदि तपाई हमेसा कार चलाउनुुहुन्छ भने आफ्नो कारमा एउटा...
कारमा यो सिस्टम जडान गरे ६० प्रतिशत खर्च घट्ने !
काठमाण्डौ । नेपालमा दिनहुँ चार पाङ्ग्रे निजी सवारीको संख्या...
दशैंको रमझममा कार जतन गर्ने यी तरिका त भूल्नु भएको कि ?
काठमाण्डौ । धनाढ्यहरुलाई कार खरीद गर्नु सामान्य कुरा होला, तर कतिपय...